ICamper - Ukusesha kwe-motorhome online
Ukuphumula eJalimane - amazwe akuhulumeni
I-AIDA Imizuzu yokugcina
Bhuka indiza ehleliwe
Bhuka indiza eshaywa
Ibhola le-UEFA EURO 2020-2021
I-Olimpiki Tokyo 2020-2021
Ama-Olimpiki Wezemidlalo 2020-2021
Ukuhamba ngomfula iRhine Main Moselle
Imephu yamacala e-coronavirus eJalimane
Amacala we-map coronavirus emhlabeni jikelele
I-Bild.de iNewsticker Corona
Morgenpost.de INewsticker Corona
Ukuhamba kwesimo sezulu
Umshuwalense wokuhamba online
Uhlu lokuhlola ukuhamba
Ukupaka esikhumulweni sezindiza
Bhuka imoto eqashisayo
Inkampani yokulungisela abahambayo
Uyemukelwa ku-Premnitz naseRathenow!
Ucingo hotline +49 3386/210 110
Ngoba Inkinga yeCorona sikumisele i-hotline ekhethekile lapho siphendula khona imibuzo mayelana nokuqaliswa nokwesulwa kohambo lwakho.
Sinike ucingo noma usibhalele nge-whatsapp.
izindaba zokuhamba zakamuva
ukubhukha kabusha kwamahhala nokukhansela 3. December 2020
IDubai yakha ihhotela elide kunawo wonke emhlabeni I-16. Novemba 2020
Iziqhingi zaseCanary - Isivivinyo seNegative corona siyimpoqo lapho kungenwa I-2. Novemba 2020
I-Federal Foreign Office iphakamisa isexwayiso sokuhambela amaCanary Islands 26. October 2020
Amabhishi amahle kakhulu emhlabeni 2020 28. Septemba 2020
Amazwe angenaso isixwayiso sohambo 18. Septemba 2020
Isixwayiso sokuhamba kwamanye amazwe angama-38 kufanele sehliswe 17. Septemba 2020
Lezi izindlela ezidume kakhulu zebhayisikili eJalimane. 7. Septemba 2020
Ukuphumula esihlabathini segolide saseBulgaria kungenzeka futhi 25. August 2020
Iholide eDenmark - Ukuhambela eDenmark futhi kungenzeka ngaphandle kokuhlala okungenani 19. August 2020
Inkampani yakho yezokuvakasha ePremnitz - Rathenow nayo yonke iBrandenburg
Bekulokhu kusukela ngo-1998 I-ejensi Yezokuvakasha Premnitz futhi lokho I-ejensi yokuhamba yeRathenow. Njengenhlangano yakho yezokuvakasha eduzane, sizokweluleka ngazo zonke izidingo zakho zokuhamba futhi sikunikeze ngezinsizakalo ezingenakuqhathaniswa, ikhono lokweluleka, ulwazi olunzulu ngezifunda zamaholide ezahlukahlukene kakhulu nentshisekelo yethu enkulu yokuhamba! Amakhasimende ethu awaveli kuphela eRathenow nasePremnitz kepha futhi avela Brandenburg kanye neHavelland yonke.
Singakujabulela ukukucebisa ngocingo, nge-imeyili noma, mhlawumbe, uqobo emahhovisi ethu amabili eRathenow eCity Centre nasePremnitz eBergstrasse 46 (State of Brandenburg).
Njengensizakalo ekhethekile, ungahlela ukuqokwa kwamakhasimende! Ngakho-ke ungahlala emuva uphumule futhi uthole izeluleko ngaphandle kwengcindezi yesikhathi. Sithumele i-imeyili nesikhathi sakho sokuqokwa osithandayo mail@reisecafe-premnitz.de noma usishayele ku-03386 210110.
Uzothola izigaba eziningi ezahlukahlukene ohambweni lwewebhusayithi yethu. Uma unemibuzo, sizokujabulela ukukusiza. Unganqikazi ukusithinta.
ngezansi Ukuvakasha kwephakheji ungathola izinjini zokubhuka ezahlukahlukene ongathola ngazo ezihlukile Angebote ingabonisa isifunda, ngokwesibonelo. Ngaphansi konke kufakiwe okunikezwayo kokuhamba kwamanje kuyaboniswa. Isigaba umzuzu wokugcina ikunikeza uhlu lwezindawo zokuvakasha ezitholakala njengamanje. Uma usebenzisa izihlungi ezahlukahlukene, futhi ungathatha ngokushesha uhambo oluphelele noma eyodwa online Bhuka ihhotela. Ngaphansi kwephoyinti lokugcina Iholide eJalimane uzothola incazelo emfushane yezwe lika-16 zombuso onesixhumanisi sokuqhubeka nokubheka nezindawo zamaholide wombuso ngamunye.
Kungani ungenzi okukodwa cruise! Khetha phakathi kokuhlukile I-Aida iyanikezela noma uthole okwakamuva U-Aida ngomzuzu wokugcina Buka ukuhamba. The Aida Cruises usebenza ahlukahlukene Imizila emhlabeni wonke. Nge Amanani entengo we-Aida Vario uhlale kuwe Ukuhamba ngomkhumbi akukho okungafiswa.
Uyindiza evama ukubukeka njalo uthanda ukukhetha izindawo owazihambelayo ngamunye ngamunye. We lingo Zabo Indiza ehleliwe noma Indiza eshaywa okwakhe. Ungasebenzisa kahle i ukungena online ukuze wamukele yakho Indiza ungancintisana.
Okunye okukhethekile kwe-ejensi yezokuvakasha i-Premnitz ne-ejensi yezokuvakasha iRathenow (Land Brandenburg) ukuhamba kwezemidlalo. Uma une travel ku Imidlalo yama-Olimpiki eJapan Tokyo 2021 ukuhlela kufaka phakathi amathikithi emiqhudelwano yomuntu ngamunye, singukuthintana okufanele wena. Okwe I-UEFA European Championship 2021 singakunika iphakheji elihlanganisiwe nendiza, Ihhotela futhi unikeze amathikithi emidlalo ngayinye.
I-Premnitz Rathenow Brandenburg Links
Inhlangano Yezokuvakasha yaseJalimane
Amagama abalulekile aqhamuka emkhakheni wezokuvakasha
All Kusho ukuthini konke ukubandakanywa?
Konke okubandakanya akubandakanyi nje kuphela izidlo kodwa futhi nazo zonke iziphuzo zalapha ekhaya nezingadakiwe.
✅ Uyini umzuzu wokugcina?
Bhuka umzuzu wokugcina izinyanga ezintathu kuya emasontweni amabili ukusuka ekuqaleni kohambo lwakho. Ngalesi sikhathi kunethuba lokubhuka izindawo ezishibhile noma izindawo ezikhanseliwe.
Luyini uhambo lokuphasela?
Uma indiza nehhotela sezivele zifakiwe entweni yokuvakasha futhi ukuvakasha kuhlelwa ngumqhubi wezinto zokuvakasha, kubizwa ngokuthi yi-package tour. Izinsizakalo ezengeziwe zokuvakasha kwephakeji zingadlulisela ehhotela noma ekudleni konke okubandakanya.
Agency Inkampani yezokuvakasha iPremnitz - Izikhathi zokuvula zeRathenow?
NgoMsombuluko - NgoLwesihlanu kusukela ngo-9.00 ekuseni kuya ku-18.00 ntambama ngoMgqibelo kusukela ngo-9.00 ekuseni kuya ku-12.00 ebusuku.
I-ejensi Yezokuvakasha Premnitz
I-Bergstrasse 46,14727, XNUMX Premnitz
I-ejensi yokuhamba yeRathenow
ECity Center, 14712 Rathenow
I-cafe yokuhamba ye-Facebook
I-Twitter Travel Cafe
I-Instagram cafe cafe
I-cafe yokuhamba ye-Youtube
Ziziqhenya ngamandla nge-WordPress | Theme: Sydney ngu -Themes.